Delicious destiny ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
2017 ထဲမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese series လေးတွေထဲကမှ Delicious Destiny ဆိုတဲ့ Comedy Romance ကားလေးကိုMMATV Page ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … စုစုပေါင်း ၅၆ပိုင်းပါဝင်ထားပါတယ် …
Delicious ဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် ထိုင်းမင်းသားချောMikeရဲ့ရှယ်မိုက်တဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေကိုပါကြည့်ရမှာနော် ( အပြင်မှာချက်တတ်လားဆိုတာတော့မသိဘူး )
Mike D’Angelo ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ … My Amazing Boy Friend 2,Mr Swimmer,The Monster killer 2,My little princess,Kiss Me ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး seriesတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့
မင်းသမီးချောလေး Mao Xiao Tong ကတော့ Fainted General , The Princess Wei Young , Love 020 , Love Yongue from the Desert , Romance of Condor Hero အစရှိတဲ့ကားတွေမှာပါဝင်
သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့သူပါ … ပြီးတော့မင်းသမီးလေးကလဲ ချစ်စရာလေးဆိုတော့ ကြည့်သင့်နေပြီနော် …
ကိုယ်ကတော့ပြန်နေရင်းနှင့်ဟင်းလျာနာမည်တွေ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ် … ဒီကားပြန်ပြီးရင် စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီ …
လီယုကျယ်(Mike)ဟာအနောက်ပိုင်းအစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့ နာမည်ကြီးစားဖိုမှုးတစ်ယောက်ပါ …
လီယုကျယ်ကို အစားအသောက်အကြောင်းတင်ဆက်တဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုကပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ် …
အဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ Player-writer ကတော့ ဆုန်းကျားမင်(Mao Xiao Tong)ပါ …
ဆုန်းကျားမင်ကဟင်းလျာတွေကိုအရသာခွဲခြားစိတ်ဖြာရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူလေးပါ …
ဒါပေမယ့်သူတို့၂ယောက်ကတွေ့တာနှင့်ကို ကြောင်နှင့်ကြွက်လို ရန်ဖြစ်ကြတာ xD …
ပြီးတော့ … ကျားမင် နှင့် ယုကျယ် က တပူးပူးတတွဲတွဲဖြစ်နေတာကို ယုကျယ်သူငယ်ချင်း ရီရိလန် က jealous ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ ??
ပြီးတော့ ကျားမင် ရဲ့သူဋ္ဌေးဖြစ်သူကျောင်းဟန် ကလည်းရိလန်ကို crushနေတဲ့အခါမှာတော့ ??
Delicious Destiny ဆိုတဲ့ကားလေးမှာ ဆက်ပြီး ခံစားကြည့်ရှုကြပါဦးလို့ …
Translated by Myint Mo Zaw, Sandar Lwin, Eaindray & Cheng Ai Zheng
File size : around 350MB
51 52 53 54 55 Final
Starring: Fang Alen, Mao Xiao Tong, Mike D'Angelo, Xu Rong Zhen, Zhang Yu Jian,